#LAND - Koorso Madaniga ah 3D oo loogu talagalay shaqooyinka madaniga - Heerka 1 - Geofumadas
Qodobbada, sagxadaha iyo iswaafajinta. Baro sida loo abuuro naqshadaha toosan ee aasaasiga ah iyo ula shaqeynta softiweerka 'Autocad Civil3D' oo lagu dabaqayo Sahanka iyo Howlaha Bulshada
Tani waa marka hore laga soo bilaabo set ka mid ah koorsooyinka 4 ee loo yaqaan 'Autocad Civil3D ee Sahaminta iyo Shaqooyinka Rayidka' kaas oo kuu oggolaanaya inaad baratid sida loo maareeyo barnaamijkan xiisaha leh ee 'Autodesk' oo lagu dabaqi karo mashaariicda kala duwan iyo goobaha dhismaha. Noqo khabiir ku ah softiweerka waxaadna abuuri kartaa dhismeyaal dunid, xisaabin kara qalabka iyo qiimaha dhismaha waxaadna abuuri kartaa naqshado waaweyn oo jidad ah, buundooyin, bullaacadaha iyo kuwa kale.
Koorsooyinkani waxay soo saareen saacado u hibeyn ah, shaqo iyo dadaal ah, ururinta xogta ugu muhiimsan ee ku saabsan mawduuca Cilmiga Bulshada iyo Topographic, soo koobaya tiro badan oo fikradeed iyo ka dhigista kuwo wax ku ool ah, si aad ugu baran karto hab fudud oo fudud. Ku dheereeya fasallo gaagaaban laakiin gaar u leh mowduuc kasta kuna tababar dhammaan (dhabta) xogta iyo tusaalayaasha aan halkaan ku bixinno.
Aan kuu soo bandhigno adduunkaan 'Autocad Civil3D, kaas oo ah aalad awood badan si loo yareeyo waqtiga badan ee qaabeynta iyo xisaabinta iyo fududeynta shaqadaada la xiriira mihnadda.
HESHIISKA SIYAASADA BASIC (1 / 4)
• Hordhac ku saabsan SOFTWARE:
- Sharaxaadda barnaamijka kumbuyuutarka.
Soo koobid iyo liiska amarada iyo howlaha ugu waaweyn.
- Qaabeynta mashruuca ee Civil3D.
- Ka soo gal dhibcaha marinka dhulka faylka qoraalka ah.
Qeexitaanka qaababka dhibcaha, qoraalka iyo sharraxayaasha.
Qaabeynta, tafatirka iyo maareynta dhibcaha dhulalka.
- Abuuritaanka iyo qeexidda dhulka TIN.
- Qeexidda qaababka iyo soo bandhigidda (qalooca heerka, khariidadda isbadelka, maabka cinwaanka, sagxada kuleylka).
- Tafatirka iyo qaabeynta sagxadaha
• TILMAAMAHA HORIZONTAL
- Abuuritaanka iyo qaabeynta isku xirnaanshaha safka (dhidibka).
• TILMAAMAHA XUQUUQDA
- Abuurista iyo qaabeynta muuqaalka mudada dheer ee dhul-gariirka (iswaafajinta toosan).
- Naqshad toos ah u dejisan (darajada mashruuca).
Post Previous«Previous #LAND - Koorsada Cirka Dhulka - Google
Post Next #BIM - Nidaamyada biyaha isticmaalaya Revit MEPNext »